जब मोलहरू डाटासेटरहरू हुन्छन् ... | Martech Zone
जब मोलहरू डाटासेटरहरू हुन्छन् ...
आइतबार, जुन 29, 2008 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
हिजो एक ठूलो दिन थियो बीन कप। बाट पेट्रिक रोकियो नोबी, डग थेइस बाट लाइफलाइन डाटासेटरहरू र पछि दिनमा, आदम बाट अनुरोध द्वारा पाठ.
लाइफलाइन डाटासेन्टरहरूको नयाँ ईस्टगेट मल्ल सुविधामा वास्तवमै शान्त र विडंबनात्मक कथा छ। इन्डियानापोलिस बिजनेस जर्नलले उनीहरूसँग एउटा खरीद गर्यो जब उनीहरूले खरिद समाप्त गरे, तर अब सुविधा जीवनमा आउँदछ। यो हरेक घण्टी र व्हिसलको साथ एक पूर्ण-सुविधायुक्त डाटाबेस हो, र म विश्वास गर्दछु इन्डियानापोलिसमा एक मात्र टियर चौथाई - र मध्यपश्चिमामा सब भन्दा ठूलो हो।
बाट फोटो डेलिभल्स :.com.
ईस्टगेट मल्ल 50० को दशकमा निर्माण गरिएको थियो र's० को दशकमा फस्टायो। थियो आधिकारिक रूपमा dead० बर्ष पछि मरे सेवा को। युएसएसआरको साथ नुके बिल्ड अपको उचाइमा निर्मित, केही मल्लमा भूमिगत बन्करहरू छन् जुन त्यतिबेला संघीय कर जम्मा गरिएको थियो। त्यसो भए - यहाँ तपाईंसँग धेरै वर्ग फुटेज, ट्राफिकमा पहुँच, एकाधिक पावर फिडहरू, जेनेरेटर, कूलि,, बम आश्रयहरू ... र मल मर्ने सुविधा रहेको छ।
तपाईं खाली मल्ललाई के गर्नुहुन्छ?
पक्कै पनि यसमा डाटासेटर बनाउनुहोस्! म निश्चित छुईन कि यस परियोजनाको लागि मूल दृष्टिकोण कसले थियो, तर यो शानदार छ - र विडम्बनापूर्ण। अब खुद्रा व्यापारको एक ठूलो अंश अनलाइन सारिएको छ भने, यो मल्ल डाटाबेसटरमा रूपान्तरण भयो कि कती राम्रो छ? यो मेरो पुस्तकमा अन्तिम विडम्बना हो! ईस्टगेटले केहि वर्ष पहिले यसको खुट्टाको ट्राफिकमा ढोका बन्द गरेको हुन सक्छ, तर यो देशको सब भन्दा ठूलो, उच्च बिक्री, 'मल्ल' को रूपमा पुनरुत्थान हुने अवसर छ!
म अर्को हप्ता वा त मा डग संग एक यात्रा को लागी एक समय सेटअप गर्न को लागी जाँदैछु। उनीहरूले के गरेछन् भनेर म हेर्नको लागि कुर्दिन सक्दिन!
टैग: ईस्टगेट मललाइफलाइन डाटा केन्द्रहरू
SERP मा गुगल साइट खोजी?
तपाईको ब्लग बृद्धि गर्नका लागि उत्तम रणनीति
जुन 29, 2008 बिहान 6:50 बजे
मलको कर्म भनेको डाटा सेन्टरको रूपमा पुनर्जन्म हुनु हो ... यसको अर्थ छ। यसलाई हामीले "ई-बुडिज्म" भन्न सक्छौं?
जुन 29, 2008 बिहान 8:39 बजे
मलाई बीन कप मन पर्यो र तपाईंसँग डग कुरा गर्दै। हामीले यो धेरै पटक गर्न आवश्यक छ। र तपाईंले (अर्को) डगको नयाँ डेटा केन्द्रको भ्रमण गर्दा मलाई गणना गर्नुहोस्!
जुन 29, 2008 बिहान 10:50 बजे
म e-budism सँग सहमत छु।
त्यो मल को बारे मा अद्भुत छ! मलाई थाहा थिएन डग यस्तो चीजमा थिए। त्यो गजब छ!
जुन 29, 2008 मा 5: 14 PM
मान्यता को लागी धन्यवाद, डग। मैले हिजो तपाईं र प्याट्रिक र बीन कप स्टाफसँग च्याट गर्न राम्रो समय बिताएँ। हामी तपाईहरुका लागि ईस्टगेटको भ्रमणको व्यवस्था गर्नेछौं।